HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aukan Aymara Baoulé Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Garifuna Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Ossète Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Uruund Venda Vietnamianina Wallis Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Nahoana Izahay no Mitory?
Ny fitoriana ataonay eran-tany no tena mampiavaka anay. Mitory isan-trano izahay, na eny amin’izay toerana ahitana olona. Fa maninona izahay no manao an’izany?
Mitory izahay satria te hanome voninahitra an’Andriamanitra sy te hampahafantatra ny anarany. (Hebreo 13:15) Te hankatò an’ity tenin’i Kristy Jesosy ity koa izahay: ‘Mandehana àry, ataovy mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra. Ampianaro izy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo.’—Matio 28:19, 20.
Tianay koa ny olon-drehetra. (Matio 22:39) Fantatray tsara hoe manana ny fivavahany ny ankamaroan’ny olona, ary tsy ny rehetra no te hihaino anay. Mamonjy ain’olona anefa ny fampianarana ao amin’ny Baiboly. Izany no mahatonga anay ‘tsy mitsahatra mampianatra sy mitory ny vaovao tsara momba an’i Kristy’, toy ny nataon’ny Kristianina voalohany.—Asan’ny Apostoly 5:41, 42.
Hoy i Antonio Cova Maduro, manam-pahaizana momba ny fiaraha-monina: ‘Miezaka mafy ny Vavolombelon’i Jehovah mba hitory ny soratra masina any amin’ny faritra lavitra indrindra amin’ny tany. Tsy kivy izy ireo manao an’izany, na dia misy aza ny olana.’—Gazety El Universal, any Venezoelà
Tsy Vavolombelon’i Jehovah ny ankamaroan’ny olona mamaky ny bokinay. Manana ny fivavahany koa ireo olona an-tapitrisany ampianarinay Baiboly. Faly anefa izy ireo satria tonga mitsidika azy ireo izahay.
Mety mbola manana fanontaniana momba ny Vavolombelon’i Jehovah ianao. Asainay àry ianao
hanontany Vavolombelon’i Jehovah.
hijery ny tranonkalanay, jw.org/mg.
hanatrika ny fivorianay, izay natao ho an’ny rehetra sady tsy misy vidim-pidirana.
Misy fanazavana bebe kokoa momba ny Vavolombelon’i Jehovah ao amin’ilay video hoe Vavolombelon’i Jehovah—Voalamina mba Hitory ny Vaovao Tsara, ao amin’ny jw.org/mg. (Jereo ao amin’ilay hoe ZAVATRA MISY > VIDEO)
Hazavain’ny Baiboly hoe iza no mety ho voavonjy.
Mandray anjara amin’ny fitoriana ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany ve ny vehivavy?
Hizara Hizara Nahoana Izahay no Mitory?